Mayelana Nathi - Hangzhou Juxian Gas equipment Manufacturing Co., Ltd.
isayensi nobuchwepheshe njengomhlahlandlela, imakethe njengomhlahlandlela, ikhwalithi yentuthuko, amathalenta njengesisekelo, ukuphatha ukudala izinzuzo, kanye nesevisi ukuze uthole ukwethembeka.
I-Hangzhou Juxian Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd. inguchwepheshe osebenza ekuhlanzeni igesi, ukuhlukanisa, amabhizinisi okuxuba, atholakala ebhange elihle lomfula iFuchun, elise-Hangzhou Fuyang Xukou Industrial park, hangzhou West Lake kanye nezindawo ezinhle kazwelonke phakathi kwenkulungwane ye-Island Lake. , umnotho othuthukisiwe, ezokuthutha ezikahle.
Imikhiqizo eyinhloko yenkampani yile: i-pressure adsorption nitrogen, imishini yokukhiqiza i-oxygen, imishini yokuhlanza igesi, isomisi sokuvuselela ukushisa okuncane, asikho isomisi sokuvuselela ukushisa, isomisi sokuvuselela ukushisa kwemfucuza, isihlungi, ithuluzi lokulawula kanye nokucaciswa okungaphezu kuka-200. uhlelo lokusebenza oluphelele ekhaya naphesheya ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yomkhiqizo kanye nenkonzo ephelele yangemva kokuthengisa.
Imikhiqizo ye-Hangzhou juxian isetshenziswa kakhulu embonini ye-petrochemical, embonini yamakhemikhali amalahle, amakhemikhali amahle, imithi yebhayoloji, i-intermediate yezemithi, isitoreji sokusanhlamvu namafutha, insimbi nensimbi, i-powder metallurgy, i-fuel cell, i-polycrystalline silicon, i-ammonia yokwenziwa, ukudla, i-electronic, ingilazi. , irabha, izindwangu, i-aerospace, ezempilo, ukuvikelwa kwemvelo, izimoto, izinkundla zikawoyela, njengezimboni ezintsha zamandla.
I-Hangzhou Juxian Gas Equipment Manufacturing Co., Ltd. enamathela "kwizinga eliphezulu, izinga eliphezulu, izinga eliphezulu" kanye "nesiko nesitayela esingathí sina, esiqinile, esiqinile", sibambelela emcabangweni wesayensi wentuthuko ukuze kuthuthukiswe ushintsho nokusungula izinto ezintsha. Le nkampani inamandla aqinile ezobuchwepheshe, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuphambili, imishini yokuhlola ephelele, ikhwalithi enokwethenjelwa, ukuphathwa kwesayensi, ukukhiqizwa kokusebenza kwemishini kuhambisana ngokuqinile namazinga kazwelonke afanele.Umoya we-Hangzhou Juxian "wokuphathwa kwesayensi nokujwayelekile, izinga eliphezulu nokusebenza kahle. service" yefilosofi yebhizinisi, ngokuya ngokumiswa kwebhizinisi, ukumiswa, izidingo zesayensi, ukuzivumelanisa nokuncintisana kwemakethe njengomhlahlandlela, ukwethulwa okuphelele kwendlela yokuphatha amabhizinisi yesimanje, ukulinganisa ngokungathí sina ukuphathwa kwangaphakathi kwamabhizinisi.
Ngenhloko-dolobha ebhalisiwe yama-yuan ayizigidi ezingu-30, inkampani yethu ithole isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-iso9001-2016, isitifiketi se-ISO14001-2015 sohlelo lokuphathwa kwemvelo, isitifiketi se-ISO45001-2018 sohlelo lokuphathwa kwezempilo, isitifiketi se-ISO13485 sohlelo lwezokwelapha nezinye izitifiketi. "ama-smes esayensi nobuchwepheshe" futhi inamalungelo obunikazi angama-25 wemodeli yensiza.
Inkampani ithatha ngokuqhubekayo izidingo zabasebenzisi njengesiqalo, ithatha ukwaneliseka kwabasebenzisi njengokujwayelekile, ithembele ezinhlelweni zamathalente, isayensi nobuchwepheshe, namandla okukhiqiza, futhi ilwela ukufinyelela ezingeni lamazwe ngamazwe ocwaningweni lwesayensi, ekuphathweni. , ikhwalithi kanye nensizakalo.Zabalazela ukwakha uhlobo oluchwepheshile, ukuphathwa kochwepheshe, ikhwalithi yobungcweti, isevisi yobungcweti, ukuze abasebenzisi bakhe izinzuzo, ukuze umphakathi uqoqe ingcebo, udale ikusasa elingcono.
"I-Juxian Gas" - inobuchwepheshe obuhamba phambili embonini, futhi ihola ubuchwepheshe bamuva bemboni.
"Juxian Gas" - njalo banamathele "isayensi nobuchwepheshe njengoba umhlahlandlela, emakethe njengoba umhlahlandlela, izinga lentuthuko, ithalenta njengento eyisisekelo, ukudala izinzuzo ngabaphathi, isevisi ukuthola ukwethembeka" inhloso yebhizinisi, thatha umgwaqo wesayensi, wochwepheshe, nowokuthuthukiswa okukhulu.
"I-Juxian Gas" - ngobuqotho kanye nekhwalithi njengenhloso, ekwenzeni abantu, ukuhlukahluka, ukukala njengomgomo wokuthuthukiswa.